खेलकुद – Nepali Audio Video
मेसी र रोनाल्डोको महा भिडन्त भोलि हुँदै
काठमाडौं । रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनाबीच शनिबार साँझ स्पेनिस ला लिगाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। रियलको घरेलु मैदान सान्टिएगो बेर्नाबेउमा शनिबार पौने ६ बजे प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। दुवै टिममा रहेका विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडीको प्रतिस्पर्धा भएकाले चर्च धेरै रहेको छ । खेललाई रियलका पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो.....
एसिसी यु १६ क्रिकेट अन्तर्गत नेपालले मलेसियालाई हरायो, फाइनलमा सिंगापुरसँग खेल्ने !
काठमाडौं नेपाल १६ वर्षमुनिको एसिसी पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । नेपालले दिएको १ सय २८ रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया २१ ओभर १ बलमा ५५ रनमा अलआउट भएपछि नेपाल ७२ रनले विजयी भएको हो । मलेसियालाई सस्तैमा सिमित गर्न सूर्य तामाङले ४.....
२२ मंसिर, काठमाडौं । स्पेनिस जायन्ट रियल मडि्रडका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिष्टियानो रोनाल्डोले पाँचौं पटक बालोन डि’ओर अवार्ड जितेका छन् । लगातार दोस्रो पटक यस उपाधि जितेका रोनाल्डोले प्रतिस्पर्धी क्लव बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सीसँग बराबरीसमेत गरेका छन् । ३२ वर्षीय स्ट्राइकर रोनाल्डोको अहम् प्रदर्शनले अघिल्लो सिजन.....
भारतीय फुटबलका कप्तान सुनीलको नेपाल प्रतिको यस्तो माया, ढाका टोपीमा सजिएर यसरी बाँधिए वैवाहिक बन्धनमा !
कोलकता भारतीय फुटबल टिमका कप्तान सुनिल क्षेत्री वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका छन् । उनी लामो समय देखिकी प्रेमिका सोनम भट्टाचार्यसँग सोमबार वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका हुन्। कोलकतामा भएको विवाहमा कप्तान क्षेत्री ढाका टोपीमा सजिएर दुलही लिन गएका थिए। घोडामा सवार क्षेत्रीले नेपाली परम्पराअनुसार विवाह गरेका हुन्।.....
विश्वकप २०१८ समीकरण यस्तो आयो , हेर्नुहोस दोस्रो चरण पुग्ने सम्भावित टोलीहरु
दोस्रो चरण पुग्ने सम्भावित टोली: समूह ‘ए’ उरुग्वे, इजिप्ट समूह ‘बी’ स्पेन, पोर्चुगल समूह ‘सी’ फ्रान्स, डेनमार्क समूह ‘डी’ अर्जेन्टिना, क्रोएसिया समूह ‘ई’ ब्राजिल, स्विट्जरल्यान्ड समूह ‘एफ’ जर्मनी, मेक्सिको समूह ‘जी’ इंग्ल्यान्ड, बेल्जियम समूह ‘एच’ कोलम्बिया, सेनेगल विश्वकपमा रहेका ३२ राष्ट्रका समूहगत विश्लेषण यस्तो.....
हजारौलाई पछि पार्दै नेपालकी चेली मिरा राईले जितिन अर्को अन्तरास्ट्रिय स्वर्ण पदक ! (फोटो फिचर)
एएफपी अल्ट्राधावक मीरा राईले हङकङको एमएसआइजी लान्ताउ ५० एसियन स्काइरनिङ च्याम्पियनसीपको उपाधि हात पारेकी छन्। उनले दोस्रो स्थान ओगट्न सफल महिलाभन्दा एक घण्टा अगावै ५० किलोमिटर लामो दौड पूरा गर्दै स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन्। पुरुषतर्फ भने स्पेनका क्रिष्टोफर क्लिमेन्ट विजेता बने। क्लिमेन्टले ५.....
विश्वकप ‘ड्र’ सम्पन्न, कुन देश कुन समुहमा हेर्नुहोस नतिजा यस्तो आयो
मंसिर १५, २०७४ आयोजक रुसले अर्को वर्ष हुने फिफा विश्वकपमा समूह चरणमा सजिलो प्रतिद्वन्द्वी पाएको छ । शुक्रबार राजधानी मस्कोमा सम्पन्न ‘ड्र’ मा रुसको समूह ‘ए’ मा दुईपल्टको विजेता उरुग्वेसहित इजिप्ट र साउदी अरेबिया परेका छन् । समूह ‘बी’ मा पूर्वविजेता स्पेनसँगै पोर्चुगल, इरान.....
चर्चित फुटबल स्टार रोनाल्डोको बिबाह नगरी कसरी भयो चौथो सन्तानका पिता ?
म्याड्रिड अविवाहित पोर्चुगिज फुटबल स्टार रोनाल्डो चौथो सन्तानको पिता बनेका छन् । रोनाल्डोकी प्रेमिका जियोर्जिना रोड्रिगेजले आइतबार राति छोरी अलना मार्टिनालाई जन्म दिएकी हुन् । रोनाल्डोको यसअघि नै तीन सन्तान छन् । यद्यपि रोनाल्डोकी प्रेमिकाबाट जन्मिएको भने अलना पहिलो सन्तान हुन् । यसअघिका तीनजना.....
एसिया कप क्रिकेटमा नेपालको ऐतिहासिक सानदार जित : भारत १९ रनले पराजित !
काठमाडौं मलेसियामा जारी एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालसँग भारत १९ रनले पराजित भएको छ । नेपालले दिएको १८६ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा भारत ४८.१ ओभरमा १६६ रन बनाउँदै अल आउट भएको हो । नेपालको जितका लागि कप्ता दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ४, पवन सरार्फ.....
हङकङसंग हारेपछि नेपाली क्रिकेटको विश्वकप यात्रा धरापमा !
अभ्यासमा कुनै कमी नराखेको र सवै पक्षमा समान ध्यान दिदै तयारी गरेको थियो यस पटक नेपालले । उसो त भारतको चेन्नईमा गएर पनि चार वटा मैत्रीपूर्ण खेल पनि खेल्यो । कप्तान तथा प्रशिक्षक एवं खेलाडीहरु पनि शत प्रतिशत जित्ने आशा लिएर हङकङ पुगेको थियो.....